Rita, Writing for My Sake!: အားပေးနှစ်သိမ့်တဲ့ အင်ဥ
Posted by Rita at 6/10/2010 09:00:00 AM
အင်ဥ စားချင်လိုက်တာ သတိရသွားပြီ
ကိုင်းဥက ကင်ရင် ပိုမွှေးတယ် ရှလွတ် သတိရသွားပီ
ချစ်တဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတဲ့ လူတွေ အများသား
ကဲ ပုံလေးကြည့်ရတာ စားချင်စရာ
မရွှေဇင် ပြောတာတော့ အင်ဥကလည်း မှိုတမျိုးလို့ ပြောတာပဲ ကျော်နှင်းဆီရဲ့။ အဖြူအမဲ ရောလာပြီးတော့ အမဲကမှ အင်ဥ။ အဖြူက ကိုင်းဥလို့လဲ ပြောကြတယ်။ ကိုယ်တော့ ဘာမျိုးလဲတို့ ဘယ်ကရလဲတို့ မသိဘူး။ သားကတော့ ဒီအတိုင်း ကော်စားလိုက်တာပဲ ဆိုတဲ့လူမျိုးဆိုတော့... :D
မှိုမျိုးဆိုပေမဲ့ သူက အခွံက ထုတ်ထုတ် ထုတ်ထုတ် နေတယ်။ အထဲမှာ အနှစ်လေးတွေက ထွေးထွေးလေး နေတယ်။ သိရသလောက်တော့ အင်ဥဟင်းကို စားဖူးသွားရင် မကြိုက်ဘဲနေတဲ့သူ မရှိဘူး။
ကိုယ်က ရန်ကုန်သူစစ်စစ်မို့ မစားဖူးဘူးထင်တာပဲ။ အင်ဥဟင်း မြည်းကြည့်ဖို့ အရမ်းစိတ်ဝင်စားသွားပြီ။း)
ရန်ကုန်မှာ မတွေ့မိဘူး။ ကိုယ်တို့ အညာမှာလဲ မစားကြဘူး။ ဒါပေမဲ့ မရွှေဇင်တို့ ရွှေမန်းအညာမှာတော့ ရှိတယ်။
ပဲခူးတိုင်းမှာနေတုန်းက မုန်းလောက်အောင် စားရတယ်။ (တကယ်တော့ မမုန်းပါဘူး။ တင်စားပြောတာပါ)
အင်ဥဒွေလာပြန်ဘီ ။ GARRRR !!!!!!
အိုး အထဲက အနှစ်ကထွေးထွေးလေးတဲ့လား
ရာဇ ဓါတုကလျာ said...
အင်ဥချက်ရင် သူငယ်ချင်းတယောက်ကို အရမ်းသတိရတယ်။ သူကလုံးဝမစားဖူးဘူး။ ကျောင်းကိုထမင်းချိုင့်ယူတော့ ကိုယ့်ချိုင့်ယူစားရင်း ကြိုက်သွားတာ။ စားပြီးတော့မှပြောရှာတယ်။ အင်ဥဆိုတော့ ဥအတုကြီးပေါ့တဲ့။ အမရီတာပြောတာ ဟုတ်တယ်။ ကိုယ့်ချိုင့်ယူစားရင်း အင်ဥတခါမှ မစားဖူးတဲ့သူတွေ ကြိုက်သွားကြတာ ၆ ယောက်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်မစားသာဘူး။ သူတို့ အိမ်က အလုပ်ရှုပ်လို့ မချက်ပေးတော့ အင်ဥချက်တာဝန်က ကိုယ့်ပေါ်ကျတော့တာပဲ။ အမရေ ပိုစ့်လေးကိုဖတ်ရတာ အရမ်းဝမ်းသာတာပဲ။
ဒါဆို JJ က ကိုယ်နေဖူးတဲ့ နေရာနဲ့ မဝေးလောက်ဘူး
ပဲခူးသူတော့မဟုတ်ပါ။ ပဲခူးတိုင်း သူ
ကျွန်မ တောင်ငူကပါ။ ပြောဖို့ မေ့မေ့နေတာ။
အင်း ဓါတုကလျာ nick မို့လို့ ထင်တော့ထင်တယ်။
ဖြူး နဲ့ တောင်ငူ 36 မိုင်လားပဲ မသိ ဝေးတာ။
“မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး သနပ်နဲ့ ပစ်ချင်” ရင်တော့ ဘွာတေးမပါတမ်းနော၊ တို့ အောက်ပြည်က မရမ်းသီးသနပ်က မျက်နှာရှုံ့ပြီး အရှူံးပေးသွားရမယ်။ (ဈေးတော့ မရောင်းလို့ လိုချင်တယ်ဆိုရင် ပို့မပေးနိုင်ပါ၊)
အင်ဥက မယားပါဘူး။ ချက်ပြီးမှ မဟုတ်ဘဲ ဒီတိုင်း အစိမ်းကို ရေဆေးတာလဲ လုပ်ဖူးပါတယ်။ မယားပါဘူး။
နောက် ကျွန်မက စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ သိပ်ဂရုစိုက်တယ်နော် (မမှားဘူးတော့ မဆိုလိုပါ)
သေနတ် is NOT equal to သနပ်
မိုးရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ အင်ဥ ကောက်ဖို့ တက်ကြွခဲ့ဖူးတယ် ။ ကိုယ်တိုင်ကောက်ပြီး ပြန်လာ ကိုယ်တိုင်ရေဆေး...ချက်တော့ မချက်တတ်လို့ အမေ့ ချက်ပေးတဲ့ အင်ဥ...အရမ်းလွမ်းတာပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ ကောက်လာတဲ့ အင်ဥ တွေ သိပ်များလာရင် ဆားလေး ထည့်ပြီး ပြုတ် ရေနွေးကြမ်းနဲ့မြည်း .. သတိရတယ် တကယ်း(
အပြုတ် မစားဖူးဘူး မေဇင်ရဲ့။ အိမ်မှာတော့ ချက်တာ။ တချို့လည်း ကြော်ကြတယ်။ ကြော်တာလည်း စားဖူးတယ်။
Tin Aung Ni is my fav cartoonist.
ဂျော်လီဆွေ တပုဒ်လောက်ရေးပါအုံး j/k :D
ဒါနဲ့ အောက်က bar ကြီးက ကွန်နစ်ရှင် မကောင်းရင် load တာမကြာစေဘူးလားလို့
“မရှိခြင်းနဲ့ ကျေးဇူးပြုတာမို့ နတ္ထိပစ္စယော”
ဒါကြောင့် ကျေးဇူးရှိကို ရှိတယ်။ ရီတာ ကျနော့်ကို ဇွတ်ကန်မငြင်းနဲ့....း-)
အင်ဥစားချင်တယ် မမရာ... :)
အင်ဥ အဖြူ အမဲ ကွဲတာက အောက်ခံ မြေပေါ်မှာ မူတည် သွားတာပါ အားလုံး ဟာ အင်ဥ ကြီးပါဘဲ
ကိုင်းဥ က သီးသန့် ပါ အမ ကိုင်းဥ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝတ္ထုတိုလေး တပုဒ် နောက်နေ့ တင်ပေးပါမယ်နော် အမှတ်မှား မှာဆိုးလို့ ပြင်ပေးတာပါ